‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ लुगाको पसल चला’उँदै १७ वर्षीया मानवी,बनिन् सबैको लागि प्रेरणा ,आखिर कसरी लागीन् यो तर्फ? – Gorkhali Dainik
काठमाडौं: सपिङ रू’चाउने जमातको दरा’जमा क’पडाको थुप्रो नै हुन्छ। उनी’हरू बजारमा आ’एका नयाँ डिजाइनका कपडा किन्छन्। ट्रेन्ड रहुन्जेल लगाउँछन्। अनि नयाँ ट्रेन्ड सुरू भएसँगै पुराना लुगा थन्क्याउँछन्। युवा पुस्तामा यो च’लन झनै बढी छ। १७ वर्षीया मानवी सुब्बालाई पनि सपिङ निकै मनपर्ने। सानैदेखि ट्रेन्ड भएका लुगा लगाउने रहर गर्थिन्।
लुगा थुप्रिँदै गएपछि हरेक पटक दरा’जमा मिलाउँदै गर्दा उनी सोच्थिन्- ‘थ्रिफ्ट स्टोर’ खोल्न पा’ए हुन्थ्यो! ‘लुगा किन्ने तर कतिपय लगाउन नपाउँदै सानो हुन थाल्यो। ती कपडा व्यवस्थित गर्ने सोचमा थ्रिफ्ट स्टोरको अवधारणा विकास भएको हो,’ झन्डै नौ महिना देखि ‘लुगा फर लेस’ नामक थ्रिफ्ट स्टोर सञ्चालन गर्दै आएकी मानवीले भनिन्। ‘थ्रिफ्ट स्टोर’ अर्थात् त्यस्तो पस’ल जहाँ बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा सामग्री किनबेच गर्न स’किन्छ, विशेषगरी प्रयोग भइसकेका सामान।
मानवीको थ्रिफ्ट स्टोरमा पनि पूर्णतया नयाँ र प्रयोग भइसकेका कपडा,जुत्ता, झोला साथै अन्य सामान सस्तोमा किनबेच गर्न सकिन्छ। यसलाई सामान्य भाषामा ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ लुगा-सामानको बजार भनेर बुझिन्छ। थ्रिफ्ट स्टोरको अवधा’रणा सुन्दा ‘अरूको शरीरमा परेको कपडा र प्रयोग भइस’केका सा’मग्री किनेर चलाउने!’ भन्ने हुनसक्छ। तर अमेरिकी र यु’रोपेली दे’शहरूमा यो चलन निकै लोकप्रिय रहेको मानवी बताउँछिन्।
अझ युरोपियन राष्ट्रहरूमा थ्रिफ्ट स्टोर चल्तीमा छ। नेपालमा पनि हालसालै अनलाइनमा थुप्रै थ्रिफ्ट स्टोर सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यस्तैमा लुगाफर लेसले पनि बजा’र लिँ’दैछ। यो को’रोना महामारीबीच, गत जेठदेखि सञ्चाल’नमा आएको हो। मानवीले योभन्दा अघिदेखि नै थ्रिफ्ट स्टोर स’ञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि हुन सकेको थिएन। ‘यसपालि महामारीको समय मौका जुर्‍यो,’ मानवीले भनिन्, ‘घर बसिरहँदा कोठा सफा गर्दै थिएँ।
दराजमा कपडा मिलाउँदै गर्दा अब चा’हिँ स्टोर खोलिहाल्छु भनेर इन्स्टाग्राममा अकाउन्ट बनाएँ र सुरू गरेँ।’ इन्स्टाग्राममा मानवीले आफ्नो थ्रिफ्ट स्टोरको नाम लुगा फर लेस राखिन् । ‘कम मूल्यमा लुगा किनबेच गर्न सकिने प्लेटफर्म भएकाले यो नाम रोजेँ । लुगा फर लेस अर्थात् कम मूल्यमा लुगा,’ मानवीले थ्रिफ्ट स्टोरको नामबारे खुलाइन्। आफ्नै कपडा र सामग्री बेच्ने हुनाले अहिले मानवीका लक्षित ग्राहक १३ देखि २० वर्ष उमेरका युवती हुन्।
अझ त्यसमा पनि विद्यार्थी वर्ग’लाई ब’ढी लक्षि’त गरेको बताउँछिन्। लुगा फरलेस सुरू गर्दा मानवीलाई साथी सर्वाणी मानन्धरले सघाएकी थिइन्। उनी’हरूले घरमा कसै’लाई नभ’नी आफ्नै हिसाबमा यो व्यवसाय सुरू गरेका थिए। आफूलाई ठीक नहुने र नलगाउने लुगा को ‘फोटो इन्स्टाग्राम’मा पोस्ट गर्दै काम थाले। कारणवश सर्वाणीले यसमा निरन्तरता दिन सकिनन्। अहिले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मानवी एक्लैले सम्हालि’रहेकी छन्। सेतोपाटिमा जुना श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ ।
Prevकाठमाडौं जादै गरेको बस दुर्घटना, तीनको मृत्यु, मनमा मायाँ भए RIP लेख्नु होला
Nextबारा जिल्लाको बाटोमै युवतीले यस्तो गर्छन।सुन्दा अचम्म लाग्छ
सारै दुखद खबर घाँस का’ट्न गएका ७ जना किशोरी बे’प,त्ता, घरमा रुवाबासी, खोजीमा प्रहरी टोली ख’टाइयो